Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Baabuurka Isafgaradka Isboortiga ee Cusub
Acura maanta waxay siisay aduunka muuqaalkeedii ugu horeeyay ee aadka loo sugayo ee cusub ee Integra, taasoo muujinaysa soo celinta magaca magaca loo dabaaldegay ee Acura lineup. Ku dhammaatay rinji Indy Jaalle Pearl oo laga soo amaahday NSX, Prototype Integra waa calaamad xooggan oo muujinaysa naqshadda dibadda ee dhammaan-cusub ee 2023 Acura Integra, kaas oo lagu qiimeeyo $ 30,000 marka ay timaado ganacsatada Acura sanadka soo socda.
- Integra Prototype waxay ku bishaaraynaysaa soo celinta suxuunta astaanta u ah safka Acura
- 2023 Integra waxay noqon doontaa isboorti isboorti oo is haysta oo leh saqaf saqaf u eg iyo naqshad dib u qaada shan albadood ah
-Integra-turbocharged warshadeed ee ugu horeysay waxay awooda ka qaadataa soosaarka sare ee 1.5-litir oo leh VTEC®
- Loogu talagalay dadka xiiseeya, gudbinta buug-gacmeedka 6-xawaare ah ayaa la bixin doonaa
- Hami gaar ah oo la heli karo, Integra cusub si uu u bilaabo ku dhawaad ​​$30,000 marka uu yimaado sanadka soo socda
Acura maanta waxay siisay aduunka muuqaalkeedii ugu horeeyay ee aadka loo sugayo ee cusub ee Integra, taasoo muujinaysa soo celinta magaca magaca loo dabaaldegay ee Acura lineup. Ku dhammaatay rinjiga Indy Yellow Pearl oo laga soo amaahday NSX, the Integra Prototype waa calaamad xooggan oo muujinaysa naqshadda dibedda ee dhammaan-cusub ee 2023 Acura Integra, kaas oo lagu kici doono qiyaastii $ 30,000 marka ay timaado ganacsatada Acura sanadka soo socda.
Waxaa dhiirigelintiisa lahaa Integras hore, oo ay ku jiraan asalka ah ee ka caawiyay soo saarista astaanta Acura ee 1986, 2023 Integra wuxuu noqon doonaa qaabka cusub ee waxqabadka albaabka ee safka Acura, isboorti isboorti oo qiimo leh oo leh naqshad shan-albaab ah oo kicinaysa iyo madadaalo-si-wadidda. Warshada-turbocharged Integra ee ugu horeysay abid waxay ka farxin doontaa jiilka cusub ee darawallada xamaasad leh oo la heli karo gudbinta buug-xawaaraha lix-xawaaraha ah, kala duwanaansho silbasho kooban iyo wax soo saarka sare ee 1.5-litir engine, la VTEC® dabcan.
"Integra waa mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan taariikhda Acura," ayuu yiri Jon Ikeda, Madaxweyne kuxigeenka iyo Sarkaalka Calaamadaha Acura. "Integra-kan cusub, wuxuu sii wadi doonaa inuu bixiyo asalka asalka ah ee gaarka ah hammi weli la gaadhi karo booska suuqa, oo leh waxqabad shucuur leh iyo qaab, oo ay weheliso wax-qabad iyo faa'iidooyin ay raadinayaan iibsadayaasha maanta."
Naqshadeynta gudaha Japan, qaab-dhismeedka cusub ee Integra ee qaabaynta geesinimada leh wuxuu leeyahay saqaf aad u jiiban iyo albaabka dambe ee dambe, taasoo siinaysa joogitaanka wadada oo kale u eg. Fasiraadda casriga ah ee khadka Integra, moodeelka jiilka shanaad waxa uu soo bandhigayaa calaamado ganacsi sida magaca Integra ee ku xardhan oo hoos yimaada nalka hore ee darawalka iyo dhinaca dhinaca rakaabka.
Marka hore waxaa lagu arkay Nooca S Fikradda, Acura's cusub ee Dheeman Pentagon grille waxay siinaysaa Integra hore dabeecad ujeedo leh iyo dabeecad cayaareed. Saxeexa nalka gaarka ah ee Acura waxaa lagu cusboonaysiiyay "Chicane" LED nalalka socda ee maalintii oo hadda meel ka sarreeya Integra's JewelEye® LED nalalka, oo soo saaraya muuqaal xitaa ka sii yaab badan.
Gawaarida taayirrada danbe ee muruqa ah iyo fascia gadaal ee gardarada leh oo leh laba-dhamaysayaal dhammays tiran waxay xoojiyaan jidka ballaadhan ee Integra. Waxaa dhiirigeliyay moodooyinkii hore ee Integra, qaabka dambe ee gaarka ah wuxuu leeyahay nalal dabadood oo ballaaran, hal gabal ah oo leh saxiixa iftiinka "Chicane". Gadaasha Integra Prototype's matte-Finish 19-inji kala qaybsan shan taayir oo hadal ah ayaa ka weyn Brembo™ bareegyada waxqabadka sare leh oo leh midab-fure Indy Jaalle calipers, oo bixiya awood joojin cajiib ah iyo muuqaal dagaal leh.
Rinjiga Jaallaha ah ee Integra Prototype's ee cajiibka ah wuxuu si gaar ah u ixtiraamaa Jaallaha Phoenix, oo lagu bixiyo astaanta 2000-2001 Integra Type R. Lahjadaha madow ee Berlina-sare ee dhalaalaya ayaa lagu dabaqay saqafka Integra, qashin-qaadaha, koofiyadaha muraayadda, qaybiyaha dambe iyo weelka hore . Garaafka hoose ee garaafku wuxuu si geesinimo leh u muujinayaa magaca Integra ee dhinaca baabuurka.
Daah-furka Acura Integra 2023 waxay calaamadin doontaa markii ugu horeysay ee Integra laga dhiso America, marka ay bilaabato wax soo saarka ballaaran sanadka soo socda ee Marysville Auto Plant ee Ohio. Dejinta in lagu dhiso isla khadka wax soo saarka ee Acura TLX, Integra waxay ku biiri doontaa dhammaan moodooyinka cusub ee Acura ee lagu iibiyo Mareykanka ee laga dhisayo Ohio.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan 2023 Acura Integra ayaa lagu sii dayn doonaa meel u dhow horudhaceeda suuqa qaybta hore ee sanadka soo socda.